သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: တိုက်ဆိုင်မှု
ဟုတ်တယ်နော် မလေး……. ဒါပေမယ့် အခုခေတ်လူငယ်တွေ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်နဲ့ (၁၃) ရက်ကို မေ့နေကြပြီလေ။ သူတို့လေးတွေ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ မေ့အောင် လုပ်တဲ့သူတွေက ရှိနေတာလေ။ အဲဒီလို နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကို ကျော်ပြီး (၁၄) ရက်နေ့ကို တမ်းတနေကြတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေ မမြင်ရတာလည်း ကြာပေ့ါ။ ပင်လုံစာချုပ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တခုလုံး သွေးစည်ညီညွတ်ခြင်း သင်္ကေတ အဖြစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂)မှာ မလေးနေတဲ့ မြို့လေးမှာလည်း အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — February 12, 2010 @ 6:58 pm |Edit This
Comment by minthant2009 — February 12, 2010 @ 9:00 pm |Edit This
မြန်မာပြည်မှာလဲ အိုလံပစ်လိုပွဲမျိုး ကျင်းပနိုင်ဖို့
နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်ရဦးမလဲ မသိဘူးနော်..
ဒီလိုပွဲမျိုးတွေ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ကျင်းပခွင့် ရချင်ပါတယ်..
Comment by ချော — February 13, 2010 @ 1:27 am |Edit This
ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အလယ်ပိုင်းရက်တွေဟာ မမေ့နိုင်စရာ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့တွေ ပါဝင်တာ အခုမှ သတိပြုမိတယ်။
မြန်မာပြက္ခဒိန်တွေ မကြည့်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေကတော့ များခဲ့တာ သေချာတယ်။
သတိတရဖြစ်အောင် ပိုစ့်တင်လိုက်တာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…။
Comment by စံ့လင်းထွန်း — February 13, 2010 @ 3:16 am |Edit This
အစ်မလေး မိန်းမိန်းက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းပါ။ ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ သူအစ်မလေးဆီရောက်လာတာပါ။ အခုလည်း သူထွက်ဖို့အတွက် လုံးပန်းရင်း ခရီးပြန်ထွက်သွားလို့ ကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးသူ တာဝန်ယူအလုပ် ပေးအပ်သွားပါတယ်း) သူ့ကိုယ်စားကျွန်တော် မေးလ်ပို့လိုက်ပါတယ်ဗျာနော…တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖဲ့ပေးလို့ အစ်မလေးကို ကျေးဇူးတင်နေပါတယ် ကြိုတင်ပြီး…။ ဗင်ကူးဗားမှ အိုလံပစ်ပွဲအကြောင်း အစ်မလေးဆီရောက်မှပဲ သိရတော့တယ်ဗျာ..
အာနိုးကို မီးတိုင်ကိုင်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့ … မိုက်တယ် ။
Comment by NLA — February 14, 2010 @ 6:31 am |Edit This
အိုလံပစ်တို့ဘာတို့ အဲသလိုပွဲတွေကို ကျွန်တော်တော့သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး..။
ဆုတောင်းပွဲတို့ဘာတို့ လုပ်နေမည့်အစား.. တစ်ခုခုကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်ပေးတာကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။
စိတ်ထဲရှိပေမယ့်…ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာမှတော့ မလုပ်ပေးနိုင်သေးတော့လည်း………….။
ပျောက်နေပေမယ့်.. ဘလော့တွေတော့ စာလိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်…. သတိရတယ်..။
Comment by Evergreen Phyo — February 15, 2010 @ 3:48 am |Edit This
ဟုတ်ပနော်… မလေးအတွက်တော့ တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့….
အဲ့ဒီပွဲကိုတော့ လာကြည့်ချင်တယ်…။ လေယာဉ်ပျံ လက်မှတ်ပို့ပေးဘာဂျ….း)
Comment by ဏီလင်းညို — February 15, 2010 @ 2:39 pm |Edit This
Comment by အိမ်လွမ်းသူ — February 27, 2010 @ 12:05 pm |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:39 PM